AKHRISO: Maxay go’aamo qaadi kartaa Soomaaliya, Haddii Wafdigii Kenya toos uga dageen Kismaayo?
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxay xalay soo saartay amar ah in dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalka Kenya iyo kuwa gudahaba ay tahay in ay kusoo hormaraan magaalada Muqdisho, ka dibna u gudbana KIsmaayo, si loo hubiyo arrimahan laakiin taasi ma dhicin.
Dawladda Kenya wafdi sare oo kasocda oo ay ka mid yihiin Taliyayaasha ciidamada ugu sareeya, Gudoomiyaha Aqbaliyadda baarlamaanka iyo xubno badan oo kale ayaa ka dagay si toos ah magaalada Kismaayo.
Dad badan waxay is weydiinayana maxaa u furan dawladda Faderaalka Soomaaliya talaabo ah oo ay qaadi kartaa, waxaana Warsidaha Puntlandtimes ogaaday go`aamo u qorsheysan dawladda Faderaalka.
Xukuumaddu waxay qaadi doontaa in ay sameyso sadex talaabo oo halis badan laftirkooda ka dhaln karto, maadaama aysan wada maamulin gudaha dalka oo dhan, waxaana kamid ah.
In Xukuumadd joojiso xariirka diblumaasiyadeed ee ay la leedahay dalka Kenya, iyadoo sabab uga dhigaysa in ay ku xadgudbeen dawladnimada Soomaaliya, taasi waxaa ka dhalanaya go`aamo waa weyn oo ay Kenya fursad u aragto.
In ay joojiso xariirka ganacsiga oo saameyn ku yeelanaya Qaadka ay Kenya ka hesho Malaayiin Dollar ee taga Soomaaliya oo dhan, laakiin joojintaas ayaan noqoneyn mid ay maamuli karto dawladdu, maadaama cabsi laga qabo in uu ka dago Puntland & Jubbaland si toos ah.
Iyo tan sadexaad oo ah in ay afka aamusto ficiladan oo dhan, ayna dacwad kale u gudbiso Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa, si lamid ah sidii ay Imaaraatka Carabta ka yeelen, laakiin tani lama mid ah talaabooyinkaas maadaama ay hadda Kenya aad ugu saameyn leedahay Soomaaliya.
Xukuumadda Faderaalka dhankeeda ayaa Ilgaar ah lagu eegayaa, sidaas oo kale duulimaadyada diyaaradaha ee gudaha dalka oo ahayd in ay soo maraan Muqdisho, ayaa la eegi doonaa wafdiga Puntland sida ay u socdaalaan in ay maraan Muqdisho iyo In kale.